Iskuul islaami ah oo la gubay | Somaliska
Axadii ayaa iskuulka lagu magacaabo Bergholmsskolan sidoo kalena loo yaqaan Alzahraa Idealiska Akadem ee ku yaal Stockholm dab la qabadsiiyay. Dabkaan ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen kuwa neceb soo galootiga balse ilaa hada dad looma soo xirin. Dabka ayaa iskuulka ka kacay 5 subaxnimo iyadoo ay qaadatay mudo saacad ku dhow in la damiyo. Qeyb ka mid ah dhismaha iskuulka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac weyn balse maamulka iskuulka ayaa sheegay in ay ka badbaadeen dhibaatada lala damacsanaa oo iskuulka intiisa badan uu badbaaday. Iskuulka Alzahraa Idealiska Akadem ayaa ka mid ah iskuulada madaxa banaan ee Muslimiinta Sweden ay furteen. Iskuulka waxaa dhigta arday gaareysa 900 iyadoo la furay sanadkii 1997. Ma ahan markii ugu horeysay ee bartilmaameed laga dhigto goobaha Muslimiinta. Sanadihii ugu dambeeyay ayaa goobaha Muslimiinta sida masaajida iyo iskuulada waxaa bartilmaameed ka dhigtay kuwa neceb ajaanibta iyadoo xitaa meelaha qaar lagu weeraray rasaas.
Iskuul islaami ah oo la gubay
Axadii ayaa iskuulka lagu magacaabo Bergholmsskolan sidoo kalena loo yaqaan Alzahraa Idealiska Akadem ee ku yaal Stockholm dab la qabadsiiyay. Dabkaan ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen kuwa neceb soo galootiga balse ilaa hada dad looma soo xirin.
Dabka ayaa iskuulka ka kacay 5 subaxnimo iyadoo ay qaadatay mudo saacad ku dhow in la damiyo. Qeyb ka mid ah dhismaha iskuulka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac weyn balse maamulka iskuulka ayaa sheegay in ay ka badbaadeen dhibaatada lala damacsanaa oo iskuulka intiisa badan uu badbaaday.
Iskuulka Alzahraa Idealiska Akadem ayaa ka mid ah iskuulada madaxa banaan ee Muslimiinta Sweden ay furteen. Iskuulka waxaa dhigta arday gaareysa 900 iyadoo la furay sanadkii 1997.
Ma ahan markii ugu horeysay ee bartilmaameed laga dhigto goobaha Muslimiinta. Sanadihii ugu dambeeyay ayaa goobaha Muslimiinta sida masaajida iyo iskuulada waxaa bartilmaameed ka dhigtay kuwa neceb ajaanibta iyadoo xitaa meelaha qaar lagu weeraray rasaas.
May 17, 2011 at 11:12
Wadankan Sweden waa sii xumaanayaa.
Asc , runtii walaal Faa’id waan kugu raacsanahay ragyigaaga.
Inkastoo anaguna aanan malaa ig ahayn ” Soomaalideena” ayaan u danleeyahay e , qaladaad badan oo iska dhaaf svenska e aan aniga xitaa mararka qaar laqi waayo ayaan ku kacnaa , waxaana ka tilmaami karaa , qof ayaa qashin soo qaadaa , ama ilmaha u soo dhiibaa markaa ayuu irida guriga qashinka dhigaa , oo halkaa foolxumada aan la eegi karin !!
Jidadka la iska fariisanaa ee qaylada afka labadii la yeeraa !! Iyo Iskuulda iyana lagu qaylinaa , guryaha lagu buuqaa , dukaamada dharka la isku qaldaa , telefoonka sida qaldan loo isticmaalaa ,, kor loogo hadlaa .
Waxaa nagu dhiban , qolyaha guryaha kireeya :: Oo Guryaha si nabad ah looguma soo celiyo markii laga kiraysto qarash badan ayaana uga baxa, guri loogo tala galay 50 sano in aan waxba laga bedelin ayaa 5 sano gudaheed dhawr mar darbigiisa la bedelaa , albaabkiisa la bedelaa .
Waxaa nagu dhiban qolyaha Gaadiidka dadwaynaha :: Basaska: iyo dadwaynaha nala raaca , waxaa …………. waxaaaaa………..waxaaaaaaaa.waxaaaaaaaaa…….
Wallaahi Soomaaliyeey Cunsuriyiinta in aan fiirinayno aan dib guryaheena u eegno. Aaan Akhlaakhdeena bulsheed eegno.
Waxyaabaha , dhacdooyinka yaabka leh ee aan u soo joogay ama soo wariyay ayaa intaa ka badan , waxa igu kalifa in aan wax ka dhahana waxaa waaye in ay jirto xikmad oranaysa CEEBTAADA oo laguu sheego waa Fiican markaa adigu isku sheegto ayayse ka anfac badanta .
Cali cabdi says:
Salamulahi caleykum dhamaan agasimka wepka somaliska iyo akhristayasha hadan fikrkeyga guda galo arinkan waa wax basiid ah marka loo eego wax yabaha ay sameynayan reer galbedka baryahan danbe waxey marayan heer ay yirahdan quranka ayaan ku jeseynaa iney gubaan iney nabigena suban nnkh ay sidey doonan ku tilmaman iyo dintena sharafta leh marka insha’allah waxan rajeynaya in gacmahena alle ku halago inta aan hanun logu tala galin wabilahi towfiikh
Cali Cabdi, waxa aan aad kugu racsanahay talada, wax sheega dhabta ah iyo sida ay inno khusayso timaanta aad bixisayba. Mahadsanid markale
Waa cashir ka mid ah xumanta nola qabo wana wax soo jireen ah waxase farxad ah sida manta musliminta ay yurub ugu bateen iyo dardarka dacwada uga wadaan in badan oo ka mida ah muslimintaas aan raacno darikha rasulkeni scw iyo asxaabtiisi oo aan wax u shegno galada laga yabe in sababkena ku muslimaan bi’idnilaah
suxaanalaah alaha naga bad baadiyo sharta gaalada naf teena iyo diin teena macaanba gaadalii waykasoodaraysaa
May 20, 2011 at 11:17
acuudu bilaah min sharil qomudaalimiin gaaladii diinteenii macaanayd ayay duulaan kusooqaadeen alow gaalo iyo shaydaanba naga adkaan